कटरीनालाई छाडेर उनको बहीनी इजाबेलमा फि’दा भए सलमान खान, देख्नासाथ भने,‘अरे वाह……..’ – Online Nepal
December 3, 2020 111
एजेन्सी । फिल्म इंडस्ट्रीकी कटरीना कैफ बलिउडकै एक नाम चलेको अनुहार हो । उनले आफ्नो अभिनयको कलाले आफ्ना फ्यानहरुको मनमा बस्न सफल भएकी छन् । कटरीनाले आफ्नो मेहनतमा बलिउडमा आफ्नो पहिचान बनाएकी छन् । कटरीना धेरैजसो आफ्नो सुन्दरताको कारण चर्चामा रहने गर्छिन् । उनको धेरै नै फ्यान फलोईंग छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
सलमानलाई इजाबेलको उक्त भिडियो निकै नै मन परेको कुरा उनले लेखेका छन् । उनले कटरीनाकी बहीनी इजाबेललाई बधाई दिंदै आगामी दिनकालागी शुभकामना पनि दिएका छन् । सलमानले बुधबार अर्थात हिजो इजाबेलको उक्त भिडियो शेयर गर्दै इजाबेललाई बधाई दिंदै लेखेका छन्‘अरे वाह इजाबेल, यो गीत निकै नै राम्रो छ । अनि तिमी पनि धेरै नै मायालु देखिएकी छौ । तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ ।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
Prevप्रेमीको विबाह मण्डपमै गएर प्रेमीकाले काटिदिईन् बेहुलीको कपाल, सबैले हेर्दाहेर्दै फेविकलले टाँसिदिईन् आँखापनि
Nextखुल्न थाले विद्यालय, यसरी पढाइँदैछ विद्यार्थी
एक छोरिले आफ्नो अ’पांग बुवालाइ गरेको मायाले बिश्वलाई रु’वायो: मन था’मेर हेर्नुहोला [ शेयर गरौ ]
यस्ता गुण भएका युवतीलाइ कहिले हेला नगर्नुहोस,बिग्रिनेछ हजुरको भाग्य
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62119)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45381)